1. Ireo singa manome tsiro mamy sy matsiro Izy ireo dia azo amboarina ho lovia sonia izay ho tian'ny olona rehetra, toy ny spaghetti, salady, na sakafo maraina mamy. Indrindra amin'ny faran'ny taona Iza no hanao fety ao an-trano Androany dia manana fomba fanaovana bacon amin'ny lafaoro isika mba hanampiana trano telo, sakafo matsiro ary manitra ho an'ny trano telo, trano valo. Miaraka amin'ny menio manankarena proteinina sy tavy hankafizanao ny andro mangatsiaka dia ampiasao lafaoro tsotra fotsiny hahazoana sakafo na akora hanaraka ny lalam-pihariana lehibe.
2. Inona ny bacon? Betsaka ny olona mbola tsy mahalala !! Satria ny bacon dia vita amin'ny kibon'ny kisoa Fa nampiana kosa rehefa avy nanisy sira sy namela fotoana maromaro. Antsoina hoe nanampy na nampiana amin'ny fitehirizana sakafo mba hihinana lava kokoa. Ny rano, sira, siramamy, sodium nitrite ary ascorbate sodium ihany no dingana lehibe fitehirizana ampiasaina amin'ny famokarana hena manitra. Fehezo ny mari-pana ary avelao mandra-pahatongan'ny volany Fitaovana ampiasaina amin'ny fanaovan-tsakafo bacon • Bacon avo lenta • Takelaka ho an'ny bacon voahandro hafanana • Oven
3. Apetraho amin'ny lovia na lovia fanaova lozika ny slon bacon. Amin'ny alàlan'ny famelarana ny bacon ka ny nofony dia aforitra na rakotra takelaka hafa Mba hahazoana hafanana manerana ny lovia Azo apetraka eo ambonin'ilay foil aluminium ampiasaina amin'ny fandrahoana sakafo. Ho fanadiovana mora foana
4. • Apetraho ao anaty lafaoro ilay lovia bacon efa voaomana. Avy eo apetaho amin'ny 205 ℃ ny maripana. • Atsofohy amin'ny sisiny voalohany mandritra ny 12-15 minitra ny bacon • Atsipazo etsy ankilany ny bacon. Arotsaka ao anaty lafaoro mandritra io vanim-potoana io ihany
5. Milamina, tsara tarehy, avoaka handamina ny lovia
6. Ny sakafo matsiro izay mampiasa bacon ao anaty lafaoro amin'ny fomba lavorary sy mora azo hanina ho sakafo tsy misy sakafo foana noho ny tsirony masira, misy menaka ary mamy kely ary fofona hazo avy amin'ny setroka. Izy io dia sakafo matsiro. Napetrany tamin'ny mofo, fromazy ary legioma tiany izy ireo dia ny Vanwich Bacon izay tsy hohadinoin'ny ankizy mihitsy. Ataovy ao anaty salady legioma ary asio fromazy, salady Caesar, lovia matsiro ao am-ponao. Mamafafa karbaala spaghetti Manampy ny halemem-panahy ho an'ny sakafo ankafizin'ny rehetra ny tsiro. Na izany aza, ny bacon dia sakafo matavy be. Ny fihinanana antonony dia mahasoa ny vatana. Fa mihinana be loatra Tena hisy vokany ratsy Andao hanao lovia matsiro Amin'ny taonan'ny modely, avy amin'ny fomba bacon vita amin'ny lafaoro tsotra, dia miparitaka ny fofon'ny fofona, manampy fahatsiarovana hafanana sy fialantsasatra.